Waa maxay Arduino? | Qalabka bilaashka ah
Dhammaanteen waan ka maqalnay Mashruuca Arduino iyo waxtarka wanaagsan ee uu u leeyahay dunida qalabka 'Hardware', laakiin runta ayaa ah in yar ay yaqaanaan dhab ahaan waxa ay Arduino tahay iyo waxa aan ku qaban karno guddi noocan oo kale ah ama waxa dhabta ah ee ay ka kooban tahay Arduino project.
Maalmahan aad ayey u fududahay in la helo guddiga arduino, laakiin waxaan u baahan doonaa inaan ogaanno oo aan haysanno wax ka badan loox Kombuyuutar ah oo fudud oo dhowr fiilooyin ah iyo qaar ka mid ah nalalka LED-ka ah lagu xiri karo
1 Maxay tahay?
2 Sidee magacaagu ku yimid?
3 Sidee uga duwan yahay Raspberry Pi?
4 Noocyo noocee ah ayaa taarikada jira
5 Maxaan u baahan nahay si aan uga dhigno mid shaqeynaya?
6 Mashaariicda qaar waxaan ku sameyn karnaa guddiga Arduino
Mashruuca Arduino waa dhaqdhaqaaq Hardware in wuxuu raadinayaa abuurista PCB ama Guddi Daabacan oo Daabacaa oo ka caawiya isticmaale kasta inuu abuuro lana horumariyo mashruucyada elektarooniga ah ee ugu dambeeya iyo kuwa shaqeynaya. Sidaas saxanka Arduino maahan wax kale oo aan ahayn guddiga PCB ee aan ku soo celin karno inta jeer ee aan dooneyno annaga oo aan bixin liisanka ama aad ku tiirsan tahay shirkad isticmaalkeeda iyo / ama abuuritaankeeda.
Dhaqdhaqaaqani (Arduino Project) wuxuu raadinayaa abuuritaanka gebi ahaanba Qalabka Bilaashka ah, taasi waa, isticmaale kasta ayaa dhisi kara looxyadooda oo ka dhigaya kuwo si buuxda u shaqeynaya, ugu yaraan u shaqeynaya sida looxyada aan iibsan karno.
Mashruucu wuxuu dhashay 2003 markii dhowr arday oo ka socda machadka IVREA ay raadinayeen badal looxyo leh BASIC Stamp microcontroller. Taarikadaani waxay ku kacayaan in ka badan $ 100 halkii cutub, waana qiime sare oo arday kasta. Sannadkii 2003 horumarkii ugu horreeyay waxay umuuqdaan kuwa leh naqshad bilaash ah oo dadweyne laakiin cidda maamusha aysan qancin isticmaalaha dhamaadka. Waxay noqon doontaa 2005 marka Atmega168 microcontroller yimaado, microcontroller aan awood u siinaynin gudiga oo kaliya laakiin sidoo kale ka dhigaya dhismihiisa mid la awoodi karo, gaadhaya maanta oo moodooyinka gudiga Arduino ay ku kici karaan $ 5.
Sidee magacaagu ku yimid?
Mashruucu wuxuu magaciisu ka yimid maqaayad u dhow machadka IVREA. Sidii aan soo sheegnay, mashruucu wuxuu ku dhashay kuleylka machadkan oo ku yaal Talyaaniga una dhow machadkaas, waxaa ku yaal aqal ardayad oo lagu magacaabo Bar di Re Arduino ama Bar del Rey Arduino. Sharafta meeshan, aasaasayaasha mashruuca, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino iyo David Mellis, Waxay go'aansadeen inay u yeeraan looxyada iyo mashruuca Arduino.
Laga soo bilaabo 2005 ilaa maanta, Mashruuca Arduino ma ahan mid muran la'aan ku saabsan hoggaamiyaasha iyo xuquuqda lahaanshaha. Sidaa awgeed, waxaa jira magacyo kala duwan sida Genuino, oo ahaa astaanta rasmiga ah ee taarikada Mashruuca ee lagu iibiyay meel ka baxsan Mareykanka iyo Talyaaniga.
Sidee uga duwan yahay Raspberry Pi?
Isticmaalayaal badan ayaa isku qalda loox Raspberry Pi iyo looxyada Arduino. Tan iyo markii ugu horreysay ee aan la xiriirin mawduuca, labada taarikada ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo isku mid ah, laakiin waxba kama jiraan runta. Arduino waa guddiga PCB oo leh microcontroller, laakiin Ma lahan processor, ma leh GPU, ma laha xusuusta wananka iyo ma laha dekedo wax soo saar sida microhdmi, wifi ama Bluetooth taasi waxay naga dhigeysaa mid awood u leh inaan u beddelno guddiga minicomputer; Laakiin Arduino waa guddi barnaamij loo samayn karo macno ahaan in aan rakibeyn karno barnaamij isla markaana Qalabka loo adeegsaday uu fulin doono barnaamijkaas: ama wax fudud sida shidida ama dabka guluubka nalka LED-ka ama wax u awood badan sida qeybta elektarooniga ah ee daabacadda 3D ah.
Noocyo noocee ah ayaa taarikada jira
Looxyada Arduino Project waxay u qaybsan yihiin laba qaybood, qaybta ugu horreysa waxay noqon doontaa guddiga fudud, guddiga PCB microcontroller y qaybta labaad waxay noqon doontaa gaashaammada ama taarikada fidinta, looxyo kudarsada shaqeynta guddiga Arduino oo kuxiran howlaheeda.
Waxaa ka mid ah moodooyinka guddiga Arduino ugu caansan:
Oo ka mid ah moodooyinka ugu caansan ama waxtarka leh Arduino gaashaan waa:
Gaashaanka Arduino GSM
Gaashaanka Arduino Proto
Gawaarida Gawaarida Arduino
Labada taarikada iyo gaashaanku waa moodooyinka aasaasiga ah. Halkaan waxaan ka heli doonnaa xirmooyin iyo qalabyo ujeedo u yeelan doona in laga dhigo Arduino inay horumariso howlo gaar ah sida mashruuca CloneWars oo abuuraya xirmooyin si loogu beddelo guddiga Arduino MEGA guddi-hoosaad 3D xoog leh.
Maxaan u baahan nahay si aan uga dhigno mid shaqeynaya?
In kasta oo ay u muuqan karto wax aan caqli gal ahayn ama la yaab leh, guddiga Arduino inuu si sax ah u shaqeeyo, waxaan u baahan doonnaa laba cunsur: awood iyo softiweer.
Ugu horreyntii waa iska cadahay, haddii aan adeegsaneyno qalab elektiroonig ah, waxaan u baahan doonnaa tamar laga soo saari karo isha korantada ama si toos ah qalab kale oo elektaroonig ah iyada oo ay ugu wacan tahay soo galinta USB-ga.
Waxaan ku heli doonnaa barnaamijka mahadnaqa Arduino IDE oo naga caawin doona abuurista, uruurinta iyo tijaabinta barnaamijyada iyo howlaha aan dooneyno in guddigayaga Arduino ay yeeshaan Arduino IDE waa barnaamij bilaash ah oo aan ka gudbi karno shabakadan. In kasta oo aan adeegsan karno nooc kasta oo kale oo ah IDE iyo softiweer, runta ayaa ah in lagu talinayo in la isticmaalo Arduino IDE tan iyo markii Waxay la jaanqaadi kartaa ugu badnaan dhammaan moodooyinka rasmiga ah ee Mashruuca Arduino waxayna naga caawin doontaa inaan dirno dhammaan macluumaadka koodhka dhib la'aan..
Mashaariicda qaar waxaan ku sameyn karnaa guddiga Arduino
Waa kuwan qaar ka mid ah mashaariicda aan ku fulin karno saxan fudud oo mashruucan ah (iyada oo aan loo eegin nooca aan dooranno) oo ay heli karaan qof walba.
Qalabka ugu caansan dhammaantood waana midka siiyay mashruuca Arduino magaca ugu badan shaki la'aan Daabac 3d, gaar ahaan nooca Prusa i3. Qalabkan kacaanku wuxuu ku saleysan yahay soo-saare iyo guddiga Arduino MEGA 2560.
Guusha mashruucan kadib, laba mashruuc oo is barbar socda ayaa dhashay taas waxay ku saleysan yihiin Arduino waxayna la xiriirtaa daabacaadda 3D. Midka ugu horreeya ayaa noqon lahaa 3D shaashadda adoo isticmaalaya saxan Arduino UNO mida labaadna waa mashruuc adeegsada loox Arduino ah si dib loogu warshadeeyo loona sameeyo feyl cusub daabacadaha 3D.
Dunida IoT waa mid kale oo ka mid ah meelaha ama meelaha ay Arduino ku leedahay mashaariic fara badan. Arduino Yún waa tusaalaha la doorbiday ee mashruucyadan sameeya qufullada elektarooniga ah, dareemayaasha faraha, dareemayaasha deegaanka, iwm ... Marka la soo koobo, buundada u dhaxeysa internetka iyo elektaroniga.
Kani waa soo koobitaan yar oo ka mid ah Arduino Project iyo looxyada Arduino. Soo koobid yar oo ina siinaysa fikrad ah waxa ay taarikadaani yihiin, laakiin sidaan soo sheegnay, bilawgooda waxay dib ugu laaban doonaan 2003 ilaa waqtigaasna, taarikada Arduino waxay ku sii kordheysay kaliya waxqabadka ama awooda laakiin sidoo kale mashaariicda, sheekooyin, khilaafaadyo iyo xaqiiqooyin aan dhammaad lahayn oo Arduino ka dhigaya ikhtiyaar aad ufiican mashruucyadayada Bilaashka ah ee Bilaashka ah ama si fudud mashruuc kastoo laxiriira Elektaroonigga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Waa maxay Arduino?
Waa maxay luqadda barnaamijka lagu baro carruurtayda